FAALLO: Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo godob lama ilaawaan ah ka galay Beelaha Soomaaliyeed kamana haridoonto. – Puntland News
Home 2017 February 16 Somali News FAALLO: Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo godob lama ilaawaan ah ka galay Beelaha Soomaaliyeed kamana haridoonto.
FAALLO: Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo godob lama ilaawaan ah ka galay Beelaha Soomaaliyeed kamana haridoonto.
February 16, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Qoraalkan Gaaban na kuma soo koobi karo Xummaan iyo Sammaan wixii ay qabatay Xukuumaddii uu Madaxweynaha ka ahaa, aan se meel uun ka abbaaro tan aan u arkay inay ugu darnayd Godob iyo Gallad wixii uu geystay qeybo yar oo ka mid ah.
DOORASHADII XUBNAHA BAARLAMAANKA.
Godobta ugu badan ee laga tirsanayo wuxuu ka galay Shakhsiyaad Xil-doon ahaa oo inay Baarlamaanka meel ka ciriirsadaan Maal iyo Maskax intaba ku bixiyey laakiin waayey markii uu Madaxweynahaas hore u adeegsaday awoodda Xafiiskii uu fadhiyey iyo mid Maaliyadeed intaba.
Waxaa kale oo uu mid taas la mid ah ka galay Beelaha Soomaaliyeed iyo xattaa Jilibyada hoose oo uu kula dhaqmay Siyaasad halis ah oo ku saleynayd QEYBI OO XUKUN.
U fiirso oo dib u raac, Beel ama Jufa kasta oo uu ka dhex arkayey Shakhsi uusan rabin wuxuu Jilibka uu kasoo jeedo maahee kan kale kasoo safay Qof isaga xiriir la leh, taasoo Beelaha qaar dhex dhigtay muran adag halka kuwana is ceshadeen si aysan arrintu Beelaha ugu horseedin Khilaaf iyo is qabsi murjiya Mustaqbalka dhaqankooda.
Hubaal in taasi saameyn weyn ku yeelatay Xushmad fara badan oo ay Hoggaamiyeyaasha Dhaqanka ee Beelaha loo awood sheegtayi u hayeen Madaxweyne Xasan Sheekh.
Odayaasha Dhaqanka ee u xil saarnaa Xulitaanka Ergada iyo Ogolaasho-siinta Tartamayaasha ayaa iyaga oo Indhahoodu shanta yihiin laga dul booday oo la soo magacowday Qof kasta oo ay Madaxweynaha iyo Kooxdiisu rabeen,tiiyoo Madaxda Beeluhuna ayan kaalin ku lahayn Hawshii socotay.
Waxay u muuqatay in Odayaashii si aan qarsooneyn loo afduubay, dhegna aan jalaq loo siin wixii Qeylo dhaan ka baxayey.
Maanta, Madaxdaas Beelahu inna Qaddarin ma u hayaan Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud?, uma maleynayo inuu intuu soo hor fariisto mar dambe Sheeko Waayeel la wadaagi doono.
Madaxweyne Xasan,dabcan wuxuu ciyaaray Khamaar siyaasadeed oo wuxuu ku afar afareystay Guul ama Guul-darro tii timaadaba inuu wajaho.
Haddii uu guuleysto wuxuu is tusiyey inuu dhaqi karo waxkasta oo uu kas u halleeyey, waana hubaa inuu la xaajoon lahaa Qof ama Qola kasta oo Godob ka tirsaneysa, Dabkii baxayna uu biyo qabow ku shubi lahaa, kuma se xisaabtamin Guul-darrada imaan kartay sida tii hadda ba ku dhacday.
Maanta ma dhaqi karo wixii shalay ka dhabqay, sababtoo ah Mansab kii iyo xattaa Maalkii uu shalay hayey middood na ma hayo, mana jirto cid hadda Dani kaga jirto inay dib ula heshiiso waayo? waxaan jirin Dano sidaas ah oo laga lahaan karo, sidaas darteed waa Godob aan ka harin oo ku heeryeysan Mustaqbalkiisa Siyaasadeed iyo midkiisa Odeynimo.
Waxay tani noqotay Cashar cusub oo loo dhigay Madaxda dambe ee sidiisa oo kale ku fekeri doonta soo sarista Xildhibaanno la saaxib ah si ay Berri ugu codeeyaan marka Doorasho madaxnimo loo madlanyahay.
Tani waxay na bartay inaan Jidkaas Guul lagu gaari karin si kastoo aad ugu dadaasho inaad Saaxada Baarlamaanka keento tiro badan oo Xildhibaanno ku taagersan ah.
Waxoogaa manfac ah ayaa laga yaabaa inay lahaan lahayd haddii uu Dalku leeyahay Nidaamka Axsaabta badan oo ay markaas awood Xibsi ku dhex yeelan karaan Baarlamaanka si ay u noqdaan Cudud saameyn ku yeelata Go’aamada Dowliga ah ee la gaarayo.
Dhanka kale, wuxuu Madaxweyne Xasan Abaal weyn gashtay intii uu shalay u hiilliyey, waana mid ugu ergan oo ay muddo dheer u heynayaan mar haddii ay Masiirka Siyaasadda Dalka maanta dhankooda ka go’aaminayaan.
Waxaa muuqata inaysan isku dhigmin Dhinacyada tirada badan ee Dhibtu kasoo gaartay Xulashadii Xildhibaanada iyo inta Xilalka heshay.
Maanta, sow ma taagna in Madaxweynihii hore uu wajiga siin kari waayo Waxgarad badan oo uu ogyahay Meeshii uu ku xumeeyey, waliba Maalin aysan muhiimad sidaas ah lahayn Madax-salaax iyo Cimaamad la is huwiyo, inkastoo aan Nabaddoon lagu magaacbo Ciise Jale mar aan dhaweyn ka maqlay Maah-maah tiraahda “Ceebu ninkii isla goda ayey qabataa”. W/qoray: Qaasim Cabdulle Xuseen (Nero)